B2B Kushambadzira Maitiro e2013 uye Beyond | Martech Zone
B2B Kushambadzira Maitiro e2013 uye Beyond
Svondo, Nyamavhuvhu 11, 2013 Mugovera, Nyamavhuvhu 10, 2013 Douglas Karr
Kana isu tichitaura kumakambani anoshandira vatengi, ivo vanogara vachibvunza kana isu tashanda pamwe nechero makambani eB2C. Kana tichitaura nemakambani eB2B, vanobvunza kana isu takashanda nemakambani eB2B. Mukuvimbika kwese, marongero akafanana chaizvo… iwo manhamba uye nzira yekutenga inosiyana. Nekudaro, isu tinoona mutsauko mubatsiro pakutenga. Makambani eB2C anowanzo tsamira munzira yekukwirira kwazvo uye mari shoma pakutenga - saka kudiwa kukuru kunokosha. Kune B2B, iko kubatanidzwa kuri kudhura zvakanyanya kuderera, manhamba ane kukosha kwakanyanya akakosha.
Ndiri kushamisika kuti vatengesi vazhinji veB2B vanoshamisika kana kushambadzira kwepamhepo kuchizovabatsira. Ndinoyeuka ndichijoinha maforamu epamhepo makore makumi maviri apfuura ini ndanga ndichishandisa iyo Internet kutsvaga hwekunze masenji emitsetse yekugadzira yaive nehunyoro huri nani uye pakakoromoka pakapfuura nzira yataishandisa muTepanhau. Zvakatora mavhiki mashoma, asi ini ndakawana zvandaitsvaga tikachengetedza makumi ezviuru zvemadhora pagore apo taisafanirwa kutsiva ma sensors akatsemuka. Iyo yaive B20B. Pamhepo.
Ikozvino, zvinotora tsvagiridzo yeGoogle uye ndinogona kuwana vanopfuura 1,500 vanogadzira masensa, maratidziro avo, ongororo dzemakambani ari kuvatengesa, uye mavhidhiyo ekuti ungashandise sei uye kupi kuti utenge. Izvo zviri B2B zvemukati. Zviri kwese kwese. Mabhizinesi anowanzo investa akakomba madhora paanotora danho rekutenga uye vatengesi vekutenga uye vatungamiriri vebhizinesi havagare vakamirira kuti mutengesi avashevedze vasati vatanga kuita sarudzo. Kazhinji, sarudzo inoitwa nenguva iyo tarisiro inokudana iwe!
GetAmbassador, yekupedzisira-kusvika-kumagumo brand brand kutumira system yemabhizinesi, yakagadzira iyi infographic pane B2B Online Kushambadzira nzira kubva kudata ravakatora kubva BtoBOnline uye TopRankBlog.
Tags: b2bb2b zvirimob2b zvemukati zvekushambadzirab2b kushambadzira
Curata: Curate Yakakodzera Zvemukati mebhizinesi rako.
Moovly: Dhizaina Mhuka Vhidhiyo, Banner Ads kana Infographics